ပြုံးရ ရယ်ရ ဝမ်းနည်းရနဲ့
၈ ၁၂ ၂၀၁၃YSWT(ဓါတ်ပုံဆရာကို ဒီကနေ ခွင့်တောင်းပါတယ် ယူသုံးထားလို့ပါ )
မကြာမီလာမည်နော် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော် မီးပုံးပျံပွဲနှင့် ကထိန်ပွဲ
တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ အထင်ကရ ပွဲတော်မှာ နွဲပျော်ချင်ဘူးလား
2013ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(10)ရက်နေ့ကနေ (17)ရက်(လပြည့်နေ့အထိ)ကျင်းပမယ့် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲကို လာရင်
ဟိုပုန်းမြို့အ၀င် ဆွမ်မီကျောင်းကို ဆရာတော် ၀စီပိတ်ဆရာတော်(တချို့တွေကတော့ ရဟန္တာတစ်ပါးဟု သတ်မှတ်ကြပါတယ်)..
ဟိုပုန်းမြို့အ၀င် လမ်းဘယ်ဘက်ခြမ်း လမ်းကြားမှ အတွင်းထဲ သို့ ၀င်က ဆွမ်မီကျောင်းကို တွေ့ရမယ်၊ ဆရာတော်က ဒေသခံတွေ ပြောကြားချက်အရ ၀စီပိတ်ဆရာတော်ပါ၊ တချို့တွေကတော့ ရဟန္တာတစ်ပါးဟု သတ်မှတ်ကြပါတယ်..တစ်နေ့လုံး တရားအားထုတ်ပြီး နေ့လည် 11နာရီမှ 12နာရီကြားတွင် ဆွမ်းထွက် ဘုန်းပေးစဉ် ဖူးမြှော်နိုင်ပါတယ် ကျန်တဲ့အချိန် တရားအားထုတ်နေပါတယ် ရှမ်းဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ၀စီပိတ်ဆရာတော်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်မှ အရေးကြီးမှ သာ စကားမြွက်ဟပါတယ် ကျောင်းမှာ လာဖူးသူများ ကို ဆွမ်းဘုန်းပေးဖို့ထွက်လာချိန်တွင် အဖူးခံပါတယ်၊ ကျောင်းမှာ ထမင်းကျွေးတာမို့ ဆွမ်းလှူခဲ့ပါတယ်.....
ရောက်ဖြစ်တဲ့အခါ သွားဖူးကြပါ တရားအားထုတ်ပြီး လောကီအလုပ် ကင်းတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးမို့ပါ
ဟိုပုန်း မြို့အ၀င် ဆွမ်မီကျောင်း မှ ဆရာတော်
ဆရာတော့်မျက်နှာမှာ နုပြီး စိုပြေသည် ၀စီပိတ်ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်သည်(အရေးကြီးလျင်တော့ စကားပြောပါသည်)
ဆရာတော်အား လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ကပ်လှူသည်ကို ဆုပေးနေပုံ
ဆွမ်မီကျောင်းသို့ မကြာမီကမှ လာရောက်သီတင်းသုံးတော်မူသော ပြင်ဦးလွင်မှ ဂျပန်ဂူဆရာတော်ဘုရား
ဆွမ်မီကျောင်းတွင် ဝေယျာဝစ္စ ကူညီပေးနေသော ဟိုပုန်းမြို့မှ ၀န်ထမ်း ဦးစီးအရာရှိ မမ
ဒီလို ကျောင်းဆောင်လေးတွေကို လှူဒါန်းပေးသူတွေ ကျန်းမာပါစေချမ်းသာပါစေ သာဓုပါ
ဆွမ်မီကျောင်း အတွင်း စေတီတော်
ဆွမ်မီဆရာတော်နှင့် ဂျပန်ဂူဆရာတော်အား လှူဒါန်းထားသည့် ရေသန့်စက်
DSA 47 48 တို့အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်
တလောက ကျောင်းဆင်းပွဲတစ်ခုမှာ တူလေးကိုသွားကြိုကြတယ် အပြန်လမ်းမှာ သူပြောလာတဲ့ စကားတွေထဲက ရင်ထဲမှာ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူခဲ့ရတဲ့ စကားလေးကိုပြန်ပြောချင်နေတာလေ---
``အန်တီသိလား သားတို့ကျောင်းက တီဗွီကြီးကွဲသွားတယ် kia က တပ်မတော်သားတွေ ကျဆုံး တဲ့ပုံတွေ၊ ဖမ်းထားတဲ့ပုံတွေပြတဲ့ ဗွီဒီယိုခွေကို ဖွင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ သင်တန်းဆရာ ဗိုလ်ကြီးတွေ ထကန် လိုက်တာ ကွဲသွားတယ်၊ ဒါနဲ့ သားတို့ မကြည့်ရတော့ဘူးလေ´´တဲ့
ဘလော့လေးကို မရောက်တာ တော်တော်ကြာလှပေါ့
ခုတလောက ဘာတွေမှန်းမသိဘူး စိတ်တွေက ပျော်ရွှင်စရာတွေ ဆိုတာ မရှိဘူး တစ်နေ့တစ်နေ့ ဖေ့ဘွတ်မှ ဖတ်နေမိတဲ့သတင်းတွေ ကကြေကွဲစရာ စိတ်မကောင်းစရာ တွေချည်း ဒါနဲ့ပဲ ဘလော့လေး မှာရေးချင်တာတွေ မရေးဖြစ်ခဲ့သလို စာရေးဖို့လည်း စိတ်မပါပါဘူး
၂၀၁၃ခုနှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီလ(၁)ရက်
မင်္ဂလာပါရှင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူအပေါင်း ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြပါစေ၊ ဘေးဘယာဝေးကွာကြပါစေ၊ ဒီဆုတောင်းလေးကို အလေးအနက် ထားပြီး ကျွန်မဆုတောင်းပါရစေရှင်---မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသ ၊ ကချင်တိုင်းရင်းသားတို့အားလုံးနဲ့ ABSDF ကျောင်းသားများအားလုံးကိုလည်း မေတ္တာပို့သပါတယ်၊ KIO/KIA အဖွဲ့မှ ဦးဂွမ်မော်၊ ဦးဂွမ်ရှောင်နဲ့ တပည့်သားများအားလုံးကိုလည်း ထပ်တူ ထပ်မျှ ဆုတောင်းပေးပါတယ်၊
တကယ်တော့ ဒီနေ့ အဲယားပုဂံရဲ့ ဖြစ်စဉ်လေးဟာ အတော့်ကို အံ့သြစရာပါ၊ မြန်မာပြည်မှာ ပျက်ကျ တဲ့လေယာဉ်တိုင်း လူရှင်တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး၊ ကားတောင် တိုက်မိရင်ဘယ်လိုနေမလဲ၊ ခုတော့ လေယာဉ်ပြေးနှုန်းနဲ့တိုင်းတာကြည့်ရင် ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်ဟာ အင်မတန်မှ ကံကောင်းလွန်းတယ် လို့ထင်ပါတယ်၊ ထိခိုက်သေဆုံးမှုနည်းတာဟာ အင်မတန်မှ အံ့သြ၀မ်းသာစရာပါ မနက်စောစော ဒီသတင်းကို ရတာနဲ့ လူတွေသေပြီလို့ထင်ပြီး ၀မ်းနည်းမှုကြောင့် မျက်ရည်ဝဲရပါတယ်၊ ဖြစ်ချင်တော့ တောင်ကြီးတစ်မြို့လုံးဟာ လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်ခဲ့ရတယ် ဟိုက ဒီက ဖုန်းတွေဝင်လာလို့ ဖုန်းဓါတ်ခဲက ကုန်သွားတော့ သတင်းတွေဟာ လူမသေဘူးလို့ရတဲ့အထိ ပဲ သိရတယ် ညနေမှ 1750လောက်မှာ မီးတွေပြန်လာတော့ ဖုန်းအားသွင်းနေရင်း သတင်းတွေ ၀င်လာပါတယ်၊ ရှစ်နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ယောက်သေတယ်တဲ့ ၊ သူ့အတွက်ရင်ထဲမှာ လုံးဝ မကောင်းပါဘူး၊ (ကလေးမသေဘူး ၊ စကားပြန် နွဲ့လင်းရှိန်ကို ကလေးလို့ထင်ခဲ့ကြတာ)ကံတရားကို ပြန်တွေးကြည့်တော့ ဒီလောက် ထက်ပိုင်းပြတ် မီးလောင်တဲ့ထဲမှာ တစ်ဦး ဆုံးရှုံးသွား တာကို ပဲ စိတ်မကောင်းစွာကြားသိရပြီး ၀န်ထမ်း၊ ခရီးသည် 71ဦးအနက် 70ဦးမှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရတာ သိပ်မပြင်းထန်ဘူးတဲ့ အမေရိကန်(2)ဦး။ တရုတ်(1)ဦး၊ ပြင်သစ်(1)ဦး ၊ ပြည်တွင်းခရီးသည် (5)ဦးတို့ ဒဏ်ရာရတယ်တဲ့၊ လေယာဉ်မှူး မောင်မောင်ထွေးက ဒဏ်ရာရတယ်တဲ့၊ ဓါတ်အားလိုင်းကို ဘီးညိပြီး သစ်ပင်တွေနဲ့အတူ ဆင်းလာချိန်မှာ အောက်က ဆိုင်ကယ်သမား (1)ဦးသေဆုံး တယ်တဲ့၊ ဒီဖြစ်စဉ်ကို ပြန်တွေးကြည့်တော့ လေယာဉ်မှူး ကို ချီးကျူးပါတယ် လူ့အသက် (70)ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးအချိန်ထိ မြေပေါ်မှာ ဒရွတ်တိုက်ဆွဲပြီး ဆင်းလာနိုင်တဲ့အတွက်၊ သူတော်တော်ကြိုးစားခဲ့ရပါမယ်၊ လူတိုင်းဟာ မတော်တဆမှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါတိုင်း သတိလစ် မေ့မျော တတ်ပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကြောင်တက်ပြီး ဘာမှ မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူး၊ လေယာဉ်မှူးကို ချီးကျူးရတာ ကတော့ ကျွန်မအတွေးမှာ သူဟာ ဆင်းမှ ဖြစ်မယ့်အနေအထားမှာ သူပြန်လှည့်လို့မရနိုင်မှန်း သိလို့ ကွင်းကို တောင်းဆင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ကွင်းကလည်း ဆင်းခွင့်တော့ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလေ၊ နှင်းကျ ပြီး ပိတ်နေရင် ၀ယ်သာမပေးရင် ဆင်းခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် နောက်လှည့်ပြန်ဖို့အတွက် သူ့မှာ အခွင့်အရေး မရှိလို့သာ ဆင်းခွင့်တောင်းခဲ့တာဖြစ်ရမယ်၊ ဒီနေရာမှာ 50း50သာအခွင့်အရေး ရှိတာကို လေယာဉ်မှူးက 90း10အခွင့်အရေး ဖြစ်အောင် သူ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တာပါ ၊ လေယာဉ်မှူးမှာသာ သတိမရှိရင် ဘီးနဲ့ဓါတ်အားကြိုးညိပါလာချိန်မှာ သူမှင်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် မှားခဲ့ရင် အဲဒီနေရာမှာတင် ပေါက်ကွဲမှုဟာ ပြင်းထန်ပြီး တစ်ယောက်မှ ရှင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ သူ့မှာ ဓါတ်ကြိုးတွေ သစ်ပင်တွေပါလာတာတောင် မြေပြင်ကို ၀ပ်ဆင်းနိုင်အောင် ပဲ့ကိုင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ မြေပေါ် ဒရွတ်တိုက် ၀ပ်ဆင်းခဲ့လို့သာ ပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ခဲ့တာ၊ လူတွေ (70)ကို (လုံးဝ၊ လုံးဝ)မယုံနိုင်အောင် အသက်ရှင်စေခဲ့တာ၊ ကျွန်မ အမြင်က သေးရင်သေးမယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ဒီနေ့ အဖြစ်အတွက် ၀မ်းနည်းရသလို၊ လူ(70)အသက်မသေတာကို ၀မ်းသာမိတယ်၊ ဒါကြောင့် လေယာဉ်မှူးကို ချီးကျူးတယ်၊ ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ တော်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်၊ မြေပြင်ပေါ်က ဆိုင်ကယ်သမားအတွက် ကတော့ စိတ်မကောင်းဝမ်းနည်းရပါတယ်၊ သူ့ကံကို က လေယာဉ်နဲ့များ သေဖို့ ကံပါသလားနော်၊ လေယာဉ်ကော တစ်ခါလောက်များ စီးဖူးပါရဲ့လားလို့ တွေးမိပါတယ်၊ (ဂရုဏာစိတ်နဲ့ပြောတာပါရှင်၊ ကျွန်မတို့တောင် လေယာဉ်မစီးဖူးတာကြာပြီလေ) သူသေရ တာကတော့ မတော်တဆမှု အတွက် ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ ရှောင်လွှဲမရနိုင်တဲ့ ရုတ်တရက်ခံစားသွား ရတာပါ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်၊ (ဒီနေ့အဖြစ်လေးကို ၀မ်းနည်းလွန်းလို့ ဒီစာလေးကို ရေးတာပါ၊ လေယာဉ်မှူးကိုလည်း လူတိုင်း ချီးကျူးနိုင်ပါစေ အမှန်မြင်ကြည့်ရင် မြေပြင် ရောက်တဲ့အထိ သူဆင်းသက်နိုင်ခဲ့တာ၊ လူ(1)ယောက်ပဲ ဆုံးရှုံးခဲ့တာ ဟာ မြင်တတ်ရင်တော့ ချီးကျူးစရာ ဂုဏ်ယူစရာပါ)
22ရက်နေ့က ငယ်ငယ်က ကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့ မိဘသဖွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်
ဆုပေးတော့ရင်ထဲမှာ ကျေးဇူးရှိဖူးတဲ့သူကို ဂါရဝပြုရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်
ငယ်ငယ်က ဒီအိမ်မှာနေခဲ့ စားခဲ့ ကစားခဲ့ အိပ်ခဲ့ရတာကိုပြန်သတိရမိတယ်
ဆေးခန်းဖွင့်ထားပြီး ခင်တို့က ကူကြသလို အန်တီကခရစ္စယာန်ဆိုတော့
ခင်တိုကပျော်ခဲ့တာပဲ ခြောက်တန်းနှစ်ကစလို့ဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိဒီမိသားစုအိမ်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့တာ သမီး သား တူတွေတူမတွေကလည်း ခင်နဲ့က မောင်နှမတွေလိုချစ်ခင်ခဲ့တာကြောင့်
ခင်ဝန်ထမ်းဘဝမှာ ငွေကြေးအဆင်မပြေတဲ့ကာလတွေမှာစိတ်ထဲကသာရှိတာ လက်ကမရောက်နိုင်ခဲ့ဘူး ဒီနေ့မှာတော့ ခင်ပိုင်ဆိုင်မှုလေးရောင်းခဲ့
မွေးမိခင်ကို တစ်သိန်း ငယ်ဘဝက ခင့်ကို ကျွေမွေးဂရုစိုက်ပြီး ခင့်ဘက်က
မားမားမတ်မတ် ရှိပေးခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေကို ကန်တော့ရင်း တူတွေတူမတွေကိုမှုန့်ဖိုးတွေပေးခဲ့တယ် ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပီတိဟာ မျက်ရည်လည်မိပါတယ်
ခင့်ငယ်ဘဝလေးမှာပျော်ရွှင်အောင်မိသားစုအိမ်လေးထဲမှာ နွေးထွေးစွာ ထားပေးခဲ့တဲ့ တောင်ကြီး ဆေးတပ် တပ်မှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီးမောင်ထွေး နဲ့
အန်တီ ဒေါ်နော်ရှာဖော တို့ကို ရင်ထဲမှာ မိသားစုလို နွေးထွေးစွာ ကျေးဇူးတင်ချစ်ခင်မဆုံးပါကြောင်း
ပီတိနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပါရစေရှင် ..........့
ချစ်ပေးခဲ့တယ်ဆို၊ ခုတော့အခါ တမာခါးတယ်ဆိုတာတောင်
ကလေးကစားစရာလို ကိုယ့်ကို လှည့်စားခဲ့တာလား...........
ကိုယ်ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဝေဒနာ တစ်စက်တစ်မှုန်လောက်တောင်
မင်းအမုန်းကို ပြုံးဟန်ဆောင် ကျေနပ်နေမှာမို့
တစ်သက်မှာ တစ်ယောက်ကို ပဲ နှစ်နှစ်ကာကာချစ်ခဲ့တာမို့
(ယွန်းဆုဝဿန်မှ ဖြိုးကိုကိုအတွက် လက်ဆောင်ပေးခြင်းပါ)26-11-2012
ဆရာ မောင်ဆန္ဒ(လယ်ဝေး)အတွက် စာပေဆု(၂)ဆုရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း
၂၀၁၃နှစ်သစ်ကို ကြိုတဲ့ အလွမ်း
ဆောင်းဆိုတဲ့ အေးမြမှုကို လွမ်းလွန်လွန်းလို့ပါ။
တစ်ခါတစ်ခေါက်တော့ ရင်ထဲမှာ ရောက်ချင်မိတာ
ခုတော့လေ ဘယ်မလဲ ချယ်ရီရေ
အော် လွမ်းရတာလည်း နှစ်နှစ်ဆယ်
ကို ခုတော့ခုတော့ ဝေးဝေးကသာ
၂၀၁၃ဆိုတာ ပေါင်းလိုက်ရင် ခြောက်ပဲရတာမို့
ဘယ်လို ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ကြိုဆိုရမလဲ
Golden Land of Myanmar, Images of Pagan Pagodas၂၀၁၁ခုနှစ်၊ မတ်လက သားလေးဆယ်တန်းစာမေးပွဲအပြီး ပုဂံညောင်ဦး ၊ ပုပ္ပါးဘုရားဖူးသွားတုန်းက ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ
ပုဂံဘုရားက ရှေးဟောင်းလက်ရာ ပန်းချီပညာ
တန့်ကြည်တောင်သို့ သွားဖို့ မြစ်ကမ်းလှေဆိပ်မှာ သားလေး
ဗူးဘုရားကို နောက်ခံထားပြီး ကမ်းစပ်မှာ စက်လှေစီးဖို့ပြင်ကြတယ်
စက်လှေတစ်စီးနဲ့ တန့်ကြည်တောင်ကို သွားကြစို့
ပုဂံက နန်းတော်ရှေ့မှာ ချစ်သားလေး
ဒါကတော့ ဘုရင့်ပုလ္လင်ရှေ့မှာ ဘယ်သူလဲ
ပြင်ဦးလွင် က National Trade Marks ဥယျာဉ်ထဲက မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်က ထင်ရှားတဲ့နေရာလေးတွေပါ(Pyin Oo Lwin-May Myo-National Trade Marks Garden)
သူရဲမကြောက်ဘူးလို့ ခင်ခင် မပြောရဲတော့ပါရှင်
သရဲခြောက်ခံရဘူးလား ခင်ခင်တို့ငယ်ငယ်က စာယောင်ယောင်ပေယောင်ယောင်သမားဆိုတော့လေ သရဲဆိုတာကို မယုံဘူး၊ ဒါပေမယ့် ညညဆို လသာသာမှာ သူများတေ...
``ဘ၀တောင်တန်း´´ ဘဝခရီးမှာ အမြင်နီးသလိုနဲ့ တောင်တန်းအသွယ်သွယ် မြင်ကွင်းမှာနီးနေသလိုပါ တကယ်တမ်းမှာ မောဟိုက်ကာ ချွေးတွေစီး လှိုက်မောက...
တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ အထင်ကရ ပွဲတော်မှာ နွဲပျော်ချင်ဘူးလား မကြာခင်မှာ 2013ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(10)ရက်နေ့ကနေ (17)ရက်(လပြည့်နေ့အထိ)ကျင်းပမယ့် တန်...
အပေါ်ယံသကာဖုံးနေတဲ့ အသည်းနှလုံးက ဘယ်လောက်ခါးသီး တယ် ဆိုတာ---ဆေးသောက်ဖူးသူတိုင်းသိကြပါတယ်၊ အထဲမှာ ခါးလွန်းလို့ အပြင်ကိုအချိုဓါတ်ဖုံးထားတဲ့...
ဟိုပုန်းမြို့အ၀င် လမ်းဘယ်ဘက်ခြမ်း လမ်းကြားမှ အတွင်းထဲ သို့ ၀င်က ဆွမ်မီကျောင်းကို တွေ့ရမယ်၊ ဆရာတော်က ဒေသခံတွေ ပြောကြားချက်အရ ၀စီပိတ်ဆရာတော...
တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ပွဲကို 21-11-2012ရက်နေ့မှ 28-11-2012ရက်နေ့အထိ(8)ရက် တိုင်တိုင် တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ အနောက်တောင်ဘက်၊ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ရဲ...
တန်ဆောင်တိုင်အမှတ်တရ (အပိုင်း ၂)
''ရန်ဖြစ်နေပြီ"လို့ အော်လိုက်သံကြောင့် ပရိတ်သတ်ကြီးကကြောက် ပြီး လန့်ပြေးကြ ၊ တိုးကြဝှေ့ကြနဲ့ ချက်ချင်းလိုလိုပဲ အုတ်အော်သော...
ရွှေဥဒေါင်းတောင် ညောင်ရွှေမြို့ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေကို ပြန်သတိရမိပါတယ်၊ ညောင်ရွှေမြို့ ကို ငယ်စဉ်ကတည်းကရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့မိတယ်၊
ဒီတစ်ခေါက် နေပြည်တော်သွားတဲ့ခရီးမှာ လွမ်းစရာလေးတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ် ----ရွှေတောင်ရိုးကားနဲ့သွားတာ၊ မြို့မဈေးရောက်တော့ ကိုယ့်အိတ်ကိုယ်ဆွဲနေတုန်း၊...
ယွန်းဆုဝဿန်၏ ဘလော့. Awesome Inc. theme. Theme images by simonox. Powered by Blogger.